प्रश्तुत छ, नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवसाय प्रतिष्ठानका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक दुर्गादत्त ढकालसँगका केही संबाद ।
१. नाथमले अहिले के गरिरहेको छ ?
पर्यटन उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएका छौ । यो सरकारद्धारा सञ्चालित एकमात्र पर्यटन तथा होटल तालिम केन्द्रको नेतृत्व संस्थाको रुपमा रहेको छ । यसका साथै बिश्वबिद्यालय तहमा ट्राभल एण्ड टुरिजम तथा होटल म्यानेजमेन्टका कोर्षहरुको बिस्तार तथा अध्यापनका लागि स्वीकृति दिने काम गरिरहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा ५ हजार जनशक्ति उत्पादन गर्नेगरी अगाडि बढेका छौ भने शैक्षिक कार्यक्रम तर्फ ४६० जना जनशक्ति यसै आर्थिक बर्षभित्र बजारमा आउनेछन ।
२. सरकारी क्षेत्रको एकमात्र सम्बन्धन दिने आधिकारिक संस्था भएर पनि यसअन्र्तगका शिक्षा तथा तालिम खर्चका हिसावले आम जनताको पहुँचभन्दा परको बिषय छ, यसमा यहाँहरुको ध्यान खै ?
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अन्य प्राबिधीक पाठ्यक्रम भन्दा महंगो छैन । निजीमा पढ्दा स्वभाविक रुपमा खर्च बढ्छ नै । यस्तोमा सामुदायिक बिद्यालयमा अध्ययन गरेर होटल तथा पर्यटन बिषय अध्ययन गर्न चाहनेलाई ५० प्रतिशत सम्म मेरिट प्रणालीमा आधारित भएर छात्रबृत्ति उपलब्ध गराएका छौ । यद्यपी पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध टुरगाईड तथा होटल तालिम क्षेत्रमा भने छात्रबृत्तिका कार्यक्रम अहिलेसम्म व्यवस्था छैन ।
३. टुरिष्ट गाईडको तालिम तथा प्रमाणपत्र लिनको लागि नाथमको बिकल्प छैन, यस्तोमा उनीहरुको स्थीति कस्तो छ ?
जति पनि पर्यटन क्षेत्रमा सम्बद्ध टुरिष्ट गाईडहरु छन, उनीहरु सबैले राम्रोसँग जिबीकोपार्जन गर्न सफल छन ।
४. उनीहरुको रोजगारीको सर्बेक्षण गर्नुभएको छ ?
औपचारिक रुपमा सर्बेक्षण नभएपनि हामीले बुझेसम्म तालिम पश्चात उनीहरुको जिबनस्तर राम्रै पाएका छौ । यसो बाटोमा कहिलेकाही भेट्दा पनि नयाँ लुगा लगाएर मुसुक्क हाँस्दै हिडेको मैले पाएको छु । यस्तोमा जिबनस्तर धान्न पुग्ने पैसा कमाएकै हुनुपर्छ । नत्र त पलायन हुने थिए । पर्यटन क्षेत्र सिजनल पेशा पनि हो । टुरिष्ट आउँदा पैसा कमाई धेरै हुन्छ, नआउँदा हुँदैन ।
५. आगामी कार्ययोजना के छ ?
नाथमलाई पर्यटन बिश्वबिधालयका रुपमा बिकास गरी ७ वटै प्रदेशमा लैजाने गरी काम सुरु भईरहेको छ । यसका लागि हामी निरन्तर कर्ममा छौ । छिट्टै रिजल्ट पाउनुहुनेछ ।